जानीराखौँ हेपाटाईटिस कस्तो रोग हो ? (अडियोसहित) – Online Jagaran
सुर्खेत, १२ साउन (जागरण) । आज विश्व हेपाटाइटिस दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरि मनाइएको छ । हेपाटाइटिसको जोखिम कम गर्न तथा विश्वलाई स्वस्थ बनाउने उदेश्यले प्रत्येक बर्षको जुलाई २८ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
हेपाटाइटिसले यो युगको सबैभन्दा खतरनाक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा विकराल रुप लिँदै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांकलाई हेर्नेे हो भने, विश्वभर ३२ करोड भन्दा बढी मनिस हेपाटाइटिस बी र सी बाट ग्रसित भएको पाइन्छ ।
यो रोगबाट ग्रसित हुने १० जनामध्ये ९ जना यस रोगबारे अनभिज्ञ रहने पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
हेपाटाईटिसका लक्षण, बच्ने उपाय तथा उपचारका विषयमा हामीले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालका कन्सलटेन्सि फिजिसियन डाक्टर के.एन पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । उहाँलाई जागरणकर्मि प्रभा रावतले सबैभन्दा पहिला हेपाटाइटिस भनेको केहो ? भनेर सोध्नुभएको छ । सुन्नुस् यो कुराकानी (अडियो) ।
Tagged विश्व हेपाटाईटिस दिवसः
१३ आश्विन २०७६, सोमबार ०७:४१ September 30, 2019 जागरण